တရုပ်ပြည်က ကုလား အစားအစာ
ဒီပုံကိုတွေ့ ရင် ဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတာ သိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်
ဒါက ထိုင်ဝမ် . ထိုင်ပေမြို့၊ကျုံးဟို မြို့ နယ်၊ ဝှာရှင်း လမ်းမ တနေရာ ။ ရွှေမြန်မာတို့တနင်္ဂနွေ တရက် ဆုံဆည်းရာ နေရာလေး ၊ အဲဒီ မြို့ နယ်လေးမှာ ရွှေမြန်မာတို့အများဆုံးနေကြတယ်လေ ။ တသိန်းလောက်ရှိတယ် ပြောတာဘဲ ။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရွှေတွေ ဘယ်လောက်များသလဲ ဆိုတော့.အဲဒီပြည်ဖွား စီလုပ်ကြီးတွေတောင် ဒီရပ်ကွက်ထဲဈေးရောင်းရင်းနဲ့ရွှေစကားတွေတောင်ပြောတတ်နေကြတယ် ။ ရောက်ခါစ ၊ သူတို့စကားမတတ်တော့ စားစရာတမျိုးဝယ်ချင်တာ ပြောမထွက်တော့ စားချင်တာကို မနဲ ပြူးပြဲရှာပြီးလက်ညှိုးထိုးပြတော့ အဲဒီဆိုင်ရှင်က ဪ ဒီမကျီးသီးလားတဲ့တထုပ် ၇၀ ကျပ်တဲ့ဗမာလို ပြန်ပြောတော့ ရီချင်စိတ်ကို မနဲအောင့် ထားရတာ။ဒါနဲ့ သူ့ ကို ၁၀၀ တန်ထုတ်ပေးတော့ ရော့ ဒီမှာ၃၀ ပြန်ပေးမယ်တဲ့ပြောတော့ အဲဒီအဖိုးကြီးကို စ ချင်တာနဲ့ ဟာ ၂၀ဘဲ ပြန်ပေးရမှာလေလို့ခပ်တည်တည် ပြောကြည့်တာ အဖိုးကြီးက ၁၀၀ ထဲက၇၀ နှုတ်ရင်ဘယ်လောက်ကျန်မှန်း ဒါလေးတောင် မသိဘူးလား ဆိုပြီးအော်ခံလိုက်ရသေးတယ်။ ကောင်းရော။
နေလာတာ အနှစ်၂၀ နီးပါး ရှိနေပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ဒီက တရုပ်စာတွေ..ဟင်းတွေ လုံးဝ မကြိုက်တော့ ..ကိုယ်တိုင်ကလဲ ဘာမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မချက်တတ်တော့ ဗိုက်ပြသနာဖြေရှင်းဖို့ ဆိုင်ရှာရတော့တာပေါ့ ။တရုပ်ပြည်နေပြီးကုလားစာလာကြိုက်မိတဲ့ ဒီပါးစပ် ကလေးကို ရွှေချထားဖို့ ကောင်းနေပြီနော် ။အရင်၁၀ နှစ်လောက်ထိတော့ ကုလားစါကို ဒီအနီးပါတ်ဝန်းမှ ရှာလို့ မရသေးတော့ စိတ်ကူးနဲ့ ဘဲ စားနေရ တာလေ။ခုနောက်ပိုင်း ၅နှစ်လောက်မှတော့ကုလား ဆိုင်လေးတွေ ဟိုတဆိုင် ဒီတဆိုင် ပေါ်လာလို့ တော်သေးတယ်။
်ဒီဆိုင်လေးက အံမယ်ပေးထားတဲ့ အမည်လေးက ရွှေအရသာ ဆိုပါလား စားကြည့်တော့လဲ အရ သာ မဆိုးပါဘူး ။တကဲ့ကုလားကြီးတွေ လက်ရာအတိုင်းပါလား ။ အဲဒီအချိန်က စပြီး ဒီဆိုင်မှာ၂ပါတ်၁ခါ ။ ၃ပါတ်တခါ ဓါတ်စာကျခဲ့ ရပါတော့တယ် ။ဈေး ကလဲ သင့်တင့်ပါတယ် . လုပ်ထားတာလဲ သန့်ပြန့် ပါတယ်
တရုပ်ပြည်က ကုလားစာ ဒီဆိုင်ကအရသာ တမျိုးထူးတာကအချဉ် စပ်ထားတာလေ .ပန်းသီး ရှောက်ချိူ သီး မုန်လာ ဥနီ ကြက်သွန်နီ ငြုပ်သီးအနီပွ ဂေါ်ဖီ ပါပါးလှီးပြီးရင် ရှာလကာရေ နဲနဲ .ဆားနဲနဲ .သကြားနဲနဲ ။ ပြီးတော့ သံပုရာသီးညှူစ် ဒီအချဉ် အတော်လေးစားကောင်းပါတယ် .တခါတလေ မရမ်းသီး သရက်သီး သနပ်တွေ ရတတ်တယ် ။ ပြီးတော့ ကုလားပဲအချဉ်ဟင်းရေ အရေကျဲလေး။
သူဟင်းနှစ် တွေလဲ ချိုပြီးမအီဘုးလေ..ဒီမှာတော့ မွေးမြူရေးကြက်တွေဘဲ ဆိုတော့ အသားက နဲနဲပွစိစိပေါ့လေ စားပြီးအီရင် ဒိန်ချဉ် သောက် ..ဗိုက်ကားတဲ့ ထိပေါ့ သူဟာနဲ့ သူ့ ဈေးလဲ သင့်ပါတယ် ဒါန်ပေါက်တပွဲ ၁၁၀ + ဒိန်ချဉ် ၅၀ = ၁၆၀ ဆို ဗိုက်တော်တော်ပြည့်ပါတယ် ။ အဟဲ တခန်းတနားပြင်ထားတဲ့ ဆိုင်ကြီးတွေမှာဆို ဒီလောက် တပွဲစာကို ၃၅၀ အထက်ပေးရတယ် ။ side dish များတဲ့ ဟော်တယ်မှာဆို ပိုဈေးကြီးတာပေါ့ ဘယ်ကိုက်မလဲနော် ။ exchange rate အခုဆို 1US# =33 NT$ ရှိတယ်လေ ။တခြားပြည်က ဈေးတွေနဲ့ နှိုင်းကြည့်လို့ ရအောင်ပါ ..
(တရုပ်ပြည် နေပြီး ကုလားစာ ကိုမှ ကြိုက်မိသူရဲ့ ရှာဖွေစားသောက် ရတဲ့ ဆိုင်လေးများ၊ နောက်ကြုံရင် နံပြားဖို ရှိတဲ့ ဆိုင် သွားပြီး ဖေါက်သည်ပြန်ချပါအုံးမယ်)
:kiki : at 11/30/2008 11:38:00 PM
ခုတလော နေသိပ်မကောင်းချင်သလိုမို့ ရောဂါအကြောင်းတွေဘဲ စ်ိတ်ထဲရောက်နေမိတယ် .. လူပင်ပန်းတာထက် စိတ်ပင်ပန်းတာက ပိုဆိုးတယ် ။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက ညောင်းညာပြီးမျက်စိနှစ်လုံးကမဖွင့်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်နေပေမဲ့တကယ်တန်းအိပ်ယာဝင်တော့ စိတ်ကူးတွေ တသီတတန်း ဘယ်က ဘယ်လိုဝင်လာမှန်းမသိ မောင်းထုတ်လဲမရ၊
ဒုက္ခပေးတာ ဒီစိတ်လေ။ အိပ် ရေး မဝတော့ နောက်တနေ့အလုပ်တက်၊ကျောင်းတက်ရသူတွေ ဦးဏှောက်အမြင် မကြည်လွင် စွာနဲ့စိတ်ပါလက်ပါ အလုပ် မလုပ်နိုင် ၊ မသင်နိုင်နဲ့မဆုံးရှုံးသင့်တာ ၊မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ကြရတာ အများကြီး မြင်ဖူး ကြားဖူးကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးကြမှာပါ။
အိပ်ချိန်မမှန်ရင် ဦးဏှောက်ကို ထိခိုက်စေတယ် ။ ဒီတော့ အိပ်စက်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်အရေးကြီသလဲဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့ သိအောင်ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ညဖက်မှာ အိပ်ချင်ကြတာလဲ ? ။
(ချွင်းချက်တော့ရှိသပေါ့ညဘက်အလုပ် လုပ်နေရတဲ့ သူတွေ မလွှဲမရှောင်သာ နဲ့အိပ်ချင်ပေမဲ့မအိပ်အောင်နေရင်း အကျင့်ဖြစ်သွားသူများ မပါဝင် ပါ ဘူး)
အိပ်ချင်စိတ်ကိုး နှိုးဆွပေးတဲ့မယ်လ်တိုနင် လို့ ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတမျိုး ( Melatonin Hormone ) ကို ညဖက် သဘာဝမှောင်လာချိန် ( true darkness ) မှာ ဦးဏှောက်ရဲ့အတွင်းပိုင်းတနေရာ မှာရှိတဲ့ ပီနီရယ်ဂလင်း( Pineal Glands) မှ ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ် (တခြားနေရာများဖြစ်တဲ့မျက်ကြည်လွှာ ၊ မျက်စိမှန်ဘီလူး ၊ အစာလမ်းကြောင်းတို့ မှလဲ အနည်းအကျဉ်း ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ် )။ နောက် တမျိုးက ကော်တီစော ( Cortisol Hormone ) ဟာလဲ မနက် အာရုံတက်ခါနီး အချိန်မှာ ထွက်တတ်ပါတယ် ။
ဒီ ဟော်မုန်း တွေက အိပ်စက်ခြင်း အာရုံကို နှိုးဆွပေးယုံမက တခြားလုပ်ငန်းတွေ ကိုပါ ပံ့ပိုး လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ် ။ ဒါတွေ ကတော့ 
ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးမှာရှိတဲ့အခြေခံ ဆဲလ် လေးတွေရဲ့ အသက်ဖြစ်တဲ့DNA မျိုးစေ့လေးတွေ အချိန်မတန်မီ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်၊(Protect DNA from damaged)
ပြီးတော့ အိုမင်း ရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်( Antioxident Action)
နောက်တခုက ခန္ဓာ ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကို လှုံ့ ဆော်ပေးပါတယ် (ှုImmune Stimulation Action)
ဒါ့အပြင် ကင်ဆာ ဆဲလ်များ နိုးကြွမှုကို ဟန့်တားပေးပါတယ် (Inhibitor of Cancer Cells)
အဲဒီလို အရေးပါတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်လုပ်မှု ဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့် လာတာနဲ့ အမျှ တဖြေးဖြေးနဲပါးလာပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အသက်ကြီးသူများရဲ့ အိပ်စက်မှုဟာ ငယ်သူများထက် တဖြေးဖြေးပိုနဲ လာတတ်ကြတာပါ ။
တချို့ဦးဏှောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါရှိသူများဥ၊ီးဏှောက်အမြှေးပါးယောင်ဖူးသူများ ။ဦးခေါင်းထိခိုက်ဒါဏ်ရာရဖူးသူများ ။ စိတ်ဖိစီးမှု ဒါဏ် ၊ ရောဂါတမျိုးမျိုး ခံစားနေရသူ များ (Emotional and physical disorders ) မှာလဲ ဒီဟော်မုန်း ထွက်နှုန်း နဲ သွားတတ်ကြပါတယ် ။ ဒီလို လူတွေရဲ့အိပ်စက်ခြင်းဟာလဲ နဲပါးသွားတတ်ကြတယ် ။
အဲဒီလို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပုံမှန် အိပ်စက်ခြင်း မရှိသူများမှာ ပုံမှန်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဖို့ သူများနဲ့ မတူ ပြောင်းပြန် တွေ ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်ကြရတာပေါ့ (Reversals of Sleep Rhythm)
နောက်ပြီး လူတယောက်ဟာ တနေ့ ကို ဘယ်နှစ်နာရီ အိပ်ရမလဲ ၊ အိပ်သင့်သလဲ ဆိုတဲ့အချက်လဲ ပြောပြချင်ပါတယ် ..
အသက်အရွယ်နဲ့အကျင့်ကိုလိုက်ပြီး တဦးနဲ့ တဦး မတူညီနိုင်မှန်း လူတိုင်းသိကြမှာပါ . ဖျမ်းမျှခြင်း အကြမ်းအားဖြင့် ပြောရရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေတဲ့အိပ်ချိန်ဟာ ၆နာရီမှ ၉နာရီ လောက်ဆို လုံလောက်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အနဲဆုံး ၄ နာရီ တော့ ရှိရပါမယ် ။
တန်ရင်ဆေး လွန်ရင်ဘေး ဆိုသလို အလွန်အကျွံအိပ်စက်ခြင်း ဟာလဲ ကျန်းမာရေးမညီညွတ်စေပါဘူး ။ သာမန် အိပ်ချိန်ထက် ၂၅% ပိုပြီး အိပ်စက်ခြင်း ကို ဆိုလိုတာပါ
( အရင် သင်ခဲ့ ရဖူးတဲ့စာအုပ်ထဲကအတိုင်းပြန်ဖေါက်သည်ချတာပါ ။ ဂဏန်းသချာင်္ သိပ်မကျွမ်းလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်တွက်ကြည့် ကြပါနော် ။ ၁၂ နာရီလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်)
အိပ်မပျော်တဲ့ ရောဂါ(Insomnia) နဲ့အအိပ်လွန်ရောဂါ(Hypersomnia) တွေအကြောင်းကို နောက် မှ ဆက်ပြီးဖေါက်သည်ချပါမယ် ။ ခုတော့ကိုယ်တိုင်လဲ အလွန်အမင်းအိပ်ချင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ခဏလောက် အိပ်လိုက်ပါအုံးမယ် ။
အချိန် ကြည့်မိတော့ 3:15 Am .. ဗုဒ္ဓေါ မြတ်စွာဘုရားးး ။ မနက်ဖန်အလုပ်တက်ရအုံးမှာ ။ဒုက္ခပါဘဲ ..သူများကို ဆရာလုပ်နေတာ မှားပါတယ် ..အိပ်ချိန် ၃နာရီဘဲ ကျန်ပါရောလား ။ Melatonin ထွက်မဲ့ အချိန်မမှီတော့ဘူး ။။
:kiki : at 11/27/2008 01:23:00 AM
အတိတ်က အရိပ်များစွာ မေ့မရသေးတဲ့ငါ
စိုးထိတ်စွာ အထီးကျန်ဆန် နေစဉ်မှာ
ချိုသာခင်မင် ပျူငှာခြင်းများစွာနဲ့ 
မပီတပြင် ပြုံးရိပ် ထူးကို မြင်မြင်ချင်း ရူးမိသမို့ ၊
မသိစိတ်နဲ့အချစ်ရိပ် နောက်မှာ
ထပ်ချပ်မခွာ လျှောက်ခဲ့ မိပါရဲ့ ။
ဒါပေမဲ့လိုက်လေ ဝေးလေ ဆွေးမပြေဘူး
တွေးမိပါမှ တခါတရံ ကြင်နာဟန်ပြပြီး
ကိုယ့်ဘဝ နာကျင်အောင် မင်းလုပ်ရက်တယ်
ပကာသနဟန်နဲ့ မာနမာန် တွေ ပြွတ်သိပ်နေတဲ့ မင်းအရိပ်ကို
တံလျှပ်ရေထင် ရွှေသမင် အလိုက်မှားပါပေါ့
ငါ့ဘဝတခုလုံး သုံးမရအောင် ပျက်သုဉ်းလောင်ကြွမ်းခဲ့ ရပြီ။
ချစ်အရိပ်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှ မောဟတောနဲ့အတ္တဇောတွေက
သောကရိပ်ဟာ ပူပင်စိတ်များစွာမို့ 
တွေးကြိတ်ခါသာ ဆုခြွေ တောင်း။
(သံသရာတကြော လူတောထဲမှာ နေ့ စဉ်ကြုံတွေ့ နေရတဲ့အရောင်ပေါင်းစုံ အရိပ်ပေါင်းစုံ တို့ နဲ့ ဝေးဝေးတနေရာ အေးဆေးတဲ့ ကမ္ဘာလေးသို့ရည်ညွှန်း၍ )
:kiki : at 11/26/2008 02:27:00 PM
NASA ကတွက်ချက် ( အမယ်)
ရက်ကလေးတောင် အတိအကျပါသေးရဲ့ 
၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ တဲ့ 
Planet Nibiru အကျိုးကြောင့် 
ကမ္ဘာမြေကြီး ပျက်စီးမဲ့အကြောင်းတဲ့လေ ။
လစ်စရာ မြေမရှိ ၊ ကမ္ဘာလူသား ဒုက္ခ အတိပေါ့ 
ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းဘဲမို့ 
ခပ်ရဲရဲသာ သေပွဲဝင်ဖို့စိတ်ထဲမှာ ထင်။
သို့ ပေမဲ့ မိုးပြိုမှာ အစိုးပိုတဲ့ တစ်တီတူးရဲ့ အဖြစ်လိုဘဲ
ခြေစုံချကာ မအိပ်ရဲနဲ့အတွေးများဖရိုဖရဲ ရှိချိန်မှာ
ဦးဖျား သတိရမိသူက မင်းလေးပါ ၊
တမြေဆီဝေးကွာပေမဲ့လဲ စိတ်အတွေးတွေက မင်းနဲ့မခွာပါဘူး။
အကုန်တကယ် မကြုံ မတွေ့ ချင်တဲ့ 
အမှန် တကယ် ကြုံရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်
အဝေးမှ တွေးဆကာ အခက်စုံတဲ့ရတက်အပုံ ပွေချင်ဘူး
နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာ လက်အစုံယှက်ကာနေရဖို့ 
(အကယ်၍သာ မိုးပြိုခဲ့ လျှင် လို့ အစိုးရိမ်ပိုနေရရှာတဲ့တစ်တီတူးလေးများ အား
ကိုယ်ချင်းစာစွာဖြင့်.... ပြီးတော့ နောက် ၄နှစ်လောက်စောင့်ကြည့်ရင် အဖြေသိရမှာပေါ့ နော် ..
အဟဲ ၊ မပြော မရှိနဲ့ နော် ။ ဒီညကစပြီး ခြေထောက်မိုးပေါ်ထောင်အိပ်ဖို့ တွေးတောမိပါကြောင်း)
:kiki : at 11/25/2008 01:54:00 AM
မင်းမှာဂတိ ကိုယ့်မှာ သစ္စာ
အရှေ့ နဲ့ အနောက် ၊တောင်နဲ့ မြောက်လို
ညှိုနှိုင်းခွင့် မရှိတဲ့တဖက်သတ်စီရင်ချက်
ကိုယ့်အသက် ကို ဓါးစက်တင်ရရင်လဲ
ပြုံးမပျက် ပေးဆက်ဖို့အမြဲအသင့်ပါ ကိုယ့်သခင်။
သစ္စာစောင့်သိ ချစ်တာ နှစ်ယောက်မရှိ
မင်းပေးတဲ့ ဂတိတွေ ကိုယ့်အတွက်အမှန်မှရှိပါ့မလားလို့ 
သံသယစိတ်လေးတောင် မင်းအပေါ်မတွေးရဲပါ ၊
မင်းကလွဲရင် ဖွဲနဲ့ ဆန်ကွဲလို့ 
ကိုယ့် ယုံကြည်ရာ ကိုယ့်သစ္စာကို
အိုဘယ့် အချစ်ရူး ။
(မမူးတမူးအချိန် စဉ်းစားမိတဲ့ အရူးတရူးရဲ့ဝေဒနာများ )
:kiki : at 11/22/2008 01:42:00 AM
အိပ်မက် တစ္ဆေ
အတိတ်တစ္ဆေ အရိပ်တစ္ဆေ တွေနဲ့ 
ထပ်ခြပ်မခွာကပ်ပါနေတဲ့အိပ်မက်တစ္ဆေ၊
ငယ်စဉ်ကသိတဲ့ ညောင်ပင်တစ္ဆေ
ဝေလေလေ ကြောက်သလိုနဲ့ 
ပြေးဆော့လို့ပျော်ကာနေခဲ့။
အခါလွန် ချစ်ခဲ့မိတဲ့အချစ်တစ္ဆေ
မျက်ကန်းတစ္ဆေ ကြောက်ပါဘူး၊
သန်းခေါင်ထက် ညဉ့်မနက်တာမို့ ၊
အိပ်မက်မှာဘဲ ပျော်ချင်တယ် ။
( နိုးတဝက် အိပ်မက်များ အား မိုက်မဲစွာ စွဲလမ်းတမ်းတခြင်း )
:kiki : at 11/20/2008 11:17:00 PM
ရလေ လိုလေ အိုတစ္ဆေ၊
မသိသူကျော်သွား ၊ သိသူ ဖေါ်စား။
ဒီခေတ်ကြီးမှာ သိတိုင်းလည်း ဖေါ်စားလို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်
ဥပမာ ..ကိုယ်အခုရှင်သန် နေထိုင်ရတဲ့ဒီကျွန်းနိုင်ငံသေးသေးလေး ။ လူဦးရေအားဖြင့် ၂၃သန်းကျော် ရှိတဲ့နိုင်ငံလေးကို ၂၀၀၀ မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထိ ၈ နှစ်တာ ကာလ အုပ်ချုပ်ခဲ့ တဲ့ သမ္မတကြီး ၊ အရင်က လူသာမန်တဦး ၊ မိဘတွေကလည်း လက်လုပ်လက်စား ။ရိုးသားကြိုးစားစွာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားပြီး တဖြေးဖြေး အမြင့်ကို တက်ခဲ့ ရတာပါ ။ကျောင်းစာတော်လို့ဥပဒေ ဆိုင်ရာ ဘွဲ့ တွေ တသီကြီး ရပြီး ရှေ့ နေ အလုပ်မှတဆင့်နိုင်ငံရေးလောကထဲ ဝင်ရောက်ပြီး လွှတ်တော် အမတ်ဖြစ် ၊ မြို့ တော်ဝန်ဖြစ် ၊ နောက်ဆုံးတော့ သမ္မတကြီးအဆင့်ထိ ရောက်ခဲ့ ပါတယ် ။
အစ ကနဦးမှာတော့ သူဟာအတော်လေး ရိုးသားပုံရှိပါတယ် ။ ရာထူးအရှိန်အဝါ
ကြောင့် အနားမှာ ကပ်ဖါးယပ်ဖါးလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးသမား ကြီးတွေရဲ့သိမ်းသွင်းမှု တွေကို လောကီသား သူတယောက်လဲ ဘယ်ကြာကြာတင်းခံနေနိုင်ပါ့မလဲနော်။။ အမှိုက်ကစလို့နောက်ဆုံးတော့ ပြသာဒ်ထိတက်ပြီး မီးလောင်တော့တာပေါ့လေ ။
စားသမှ နဲနဲနောနော ဟုတ်ဘူးနော် ။ဘီလီယံ ဘယ်နှစ်ဆယ်လဲ ဆိုတာ ခုထိ စာရင်းကောက်လို့မပြီးသေးဘူး ။ သူ့တဆွေတမျိုးလုံးနာမယ်တွေနဲ့တကမ္ဘာလုံး ကနာမယ်ကြီးဘဏ်တိုက်ကြီးတွေမှာ ဖြန့်ထားတာတွေ မယုံကြည်လောက်စရာကိုများပြားနေတာလေ။
(ဘာတဲ့့ပစပ်ဖျားလေးတင် နာမယ်မေ့နေတဲ့မမ ?? နိုင်ငံတခုက အစားကြီးတဲ့ဟိုဒင်းမှုးကြီးနဲ့အပြိုင် စားပွဲလုပ်ရင်တော့ သူက ဒုတိယနောက်ဆွဲ ဖြစ်မှာတော့ သေချာပါတယ်၊ ဟိုက စူဇကာ ပုဏ္ဏား လှူတာရော မလှူတာပါ အကုန်စားတဲ့ အဟွာ လူကြီးလေ ။ ဟဲဟဲ )။
ဒီသမ္မတရဲ့first lady ကတော်ကြီး ကိုယ်တိုင်က အောက်ပိုင်းသေလို့ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နဲ့လှုပ်ရှားသွားလာနေရတာ ၁၀နှစ်ကျော်ကြာ ရှိပေမဲ့အတော်လေးကိုသြဇာရှိပါပေတယ်။ အမျှော်အမြင်ကြီးစွာနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ပါပေတယ် ။အာဏာသုံးတော့ ငွေဖြစ်တယ် ၊ငွေကိုထပ်ပွားအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ သူမတူအောင်လှည့်နိုင်တဲ့မျက်လှည့်ဆရာတွေ တောင်သြချရလောက်ပါပေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပထမလေးနှစ်သက်တမ်းပြီးတော့ ဒုတိယလေးနှစ်အတွက် ဗိုက်ကိုသေနတ်အပစ်ခံပြီး နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေထွင်ပြီး အတိုက်အခံပါတီကို နှာတဖျားနဲ့ အနိုင်ယူ ခဲ့ တာလဲ ရာဇဝင်တင်လောက်ပါပေတယ်။
ရေစီးတခါ ရေသာတလှည့် . ၊ အတက်ရှိရင် အကျရှိရတဲ့ လောကဓမ္မတာကို ဘယ်သူမှ မရှောင်လွှဲနိုင်ကြပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့အချိန်တန် နပိန်ကန်ချိန်ရောက်တော့ ဆက်ပြီးအရွေးခံခွင့် မရှိတော့တဲ့ ဒီမို နိုင်ငံ အစဉ်အလာအရ ဒီနှစ် မေလ မှာသမ္မတရာထူးမှ ထွက်ချိန်တန်လာခဲ့ ပါတယ် ။
အဲဒီနောက် ဘာတွေ ဖြစ်သလဲ ။ သူ စားခဲ့ တဲ့ အမှုတသီတတန်းကြီးအတွက် ဥပဒေကို ရင် ဆိုင် ရတော့မှာပါ။
သူကိုယ်တိုင်က ဥပဒေကိုနောကြေနေတဲ့ လူတယောက်ဆိုတော့ လက်တလုံးခြားလှည့်ကွက်တွေ တွင်တွင်သုံးပြီး ဖမ်းဝရမ်းနဲ့ အချုပ်ခံနေရချိန်မှ စပြီး အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေတာ ခုဆို ရက်သတ္တ တပါတ်စွန်းစွန်းလေးရှိတဲ့ အချိန် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက တောင့်မခံနိုင်တော့ ဆေးရုံပေါ်မှာ မြော့မြော့လေးပေါ့ ။
..ဒါပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ နိုင်ငံဆိုတော့ ဘယ်လိုလှည့် ကွက်တွေ သုံးပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်သူမပြုမိမိမှုဆိုတဲ့ အတိုင်း ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒါဏ်ကို ခံရမှာ သေချာပါတယ် ။
ဒီတော့ဘာကိုဆိုလိုချင်သလဲဆိုတော့...
လူတွေဟာ ဆင်းရဲဒါဏ်ကို ခံနိုင်ပေမဲ့ ချမ်းသာဒါဏ်ကိုမခံနိုင်ကြဘူးဆိုတာ ကိုယ်အရင်က သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူး ။ပုထုစဉ် လူသား အများအပြားဟာ အာဏာ ၊ငွေ ရဲ့ အထိ အတွေ့ ကို မလွန်ဆန်နိုင်ကြဘဲ .ယစ်မောသာယာနေတတ်ကြပါတယ် ။ ဦးဏှောက်ရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု ၊ အမှား အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှုတွေကို အာဏာ ငွေ တိမ်သလ္လာတွေ ဖုံးလွှမ်းသွားချိန်မှာ ဘဝခရီးက တိမ်းစောင်းလမ်းမှား သွားလေ့ရှိကြပါတယ် ။လောဘ ဒေါသ မောဟတွေနဲ့ပြည့် နှက်နေကြတဲ့ ဒီလောကကြီးထဲ .. အတောမသတ် နိုင်တဲ့ လောဘပင်လယ်ကြီးထဲ ... ဒီလူသားတွေ ဘယ်လောက်ကြာကူးခတ်နေကြရအုံးမှာလဲ ။
လူတွေ လူတွေ ...ရောင့်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ခြင်းမရှိကြသေးတဲ့ ဒီလူတွေထဲ ကိုယ်တယောက်လဲ အပါအဝင်ဖြစ်နေပြီလားလေ ?? ခြေထောက် နှစ်ချေုာင်းထဲ ရှိတဲ့ဒီလူသားတွေဟာ ခြေထောက်လေးချောင်းရှိတဲ့ ဒီငွေသား နောက်အမှီလိုက်နေရတာ လူသာ ဖတ်ဖတ်မောရော ။
လိုက်လေ ဝေးလေ နဲ့အဆုံးမသတ်နိုင်ပါဘူး ။ မောလို့နားချင်ပေမဲ့မနားနိုင်သေးဘူးကွယ် .. နောက်ကျ ကျန်နေရစ်မှာ စိုးရသေးတယ်လေ ။ သဘောပေါက် နားလည်ပေးကြပါနော် .. မဝေးတော့တဲ့တနေ့ တော့ကိုယ်ပြန်လာမှာပါ။
:kiki : at 11/19/2008 01:13:00 AM
တွေ့ ကြုံဆုံကွဲ ဖြစ်မြဲပေမဲ့ လမ်းခွဲဖို့ ကို ရင်မဆိုင်ရဲပါ
ဝေးနေရချိန်တိုင်း တွေ့ ချင်နေပေါ့ အချိန်တွေ အမြန်ကုန်ပါစေလို့ 
မျှော်လင့်ကာ ပြန်တွေ့ ရက်ကို လက်ချိုးရေတော့
တရက်နဲ့တရက်ဟာ ယူဇနာများစွာ ကွာနေသလို
စိတ်အထင်မှာ ဘဝင်မကျ ချင်ဘူး
ဝေးတသက်သက် ပေမဲ့နီးတကျက်ကျက်လဲ မဖြစ်လိုပါ
ကလေးတယောက်လို ဆိုးနွဲ့ ကာ အနိုင်ယူလဲ၊
ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ အစဉ်အမြဲ ခွင့်လွှတ်ထားပါတယ်
အတူဆုံမဲ့အချိန်လေးတွေ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကုန်ဆုံးပါရစေနော်။
သို့ ပေမဲ့ အချိန်တန် အိမ်ပြန်ရဖို့ အရေး၊
တွေးမိတော့ စိတ်မှာလေးကာ အနာဂတ်ကို မလိုချင်တော့ပါဘူး။
သူ့ အနားရှိတဲ့ပစ္စုပ္ပန်ကာလလေးမှာ တသက်တာနေရလိုပါ၏၊
မဖြစ်နိုင်သည့် ဆုတွေချွေမိလို့ဘေးလူတွေလှောင်ပြောင်ကြရင်လဲ၊
ကြောင်တောင်တောင် လူတကောင်ပေမို့၊
နာပါဘူး ကိုယ့် စိတ်အစဉ် လိုချင်တာ တခုထဲပါလို့ 
(မဖြစ်နိုင်တာကို တမ်းတခြင်းတွေထဲက တခု)
:kiki : at 11/16/2008 12:51:00 AM
မျက်နှာငွေလ ရွှင်ပြပြကို မမြင်ရတာကြာလို့ 
ဘဝင်မကျစွာ ရင်ထဲမှာ ငို ။
လပြည့်ည ငွေတန်ဆောင်မှာ ဆီမီးမြိုင်စွာ အပြိုင်ထွန်းခဲ့ကြ၊
ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ အတိတ်ဘဝလေးများကို ။
မွန်းကြပ်တဲ့ မြို့ ပြအရပ်မှာ
ကားသံ လူသံ ပူညံသံ စုံစွာနဲ့ 
စုန်ဆန်ကာ လှုပ်ရှားနေရသမို့ ၊
လပြည့်လကွယ် ရက်လများတောင်
ဘယ်သူမှ သိနိုင်မယ် ထင်မိဘူး။
ဒီလို လပြည့် ညများ မှာ သာယာလှပ ဖိုးငွေလကို
တပါးသူများစွာ ကြည့် ကာလေ ပျော်ရွှင်ကြချိန်မှာပေါ့
ဖေါ်မဲ့တဲ့ ကိုယ့်မှာတယောက်ထဲမို့ 
မမြင်သာတဲ့ဖိုးလမင်းကို
မှန်းဆကာ လွမ်းခြင်းများစွာနဲ့ 
ကိုယ့်ရင်ထဲက လမင်း ငယ် ...
(ဒီ တန်ဆောင်တိုင် မီးထွန်းပွဲတော် မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြသူများကို အားကျစွာဖြင့် အမှတ်တရ လွမ်းချင်းလေးတခု)
:kiki : at 11/13/2008 12:09:00 AM
မိမိကိုယ် မိမိ သတ်သေခြင်း(အဆုံးစီရင်ခြင်း)
ဒီနေ့မနက်စောစော နာရီအချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံကြားပေမဲ့မနေ့ ညက အတွေးပေါင်းများစွာကြောင့် မိုးလင်းခါနီးမှ အိပ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ် ၊ အိပ်ရေးမဝလို့နာရီခေါင်းလောင်းလေး ပြန်ပိတ်ပြီး ခဏဆက်နှပ်နေတာ...အဲဒီအချိန် တယ်လီဖုံးသံက ငှက်ဆိုးထိုးသံလို စူးရှစွာ အော်လာတဲ့အတွက် အိပ်မှုံစုံမွှားနဲ့ထရတော့တာပေါ့။ အရေးပေါ်လူနာလာလို့ လေ ၊ စိတ်ထဲတော့ တော်တော်ရှုပ်သွားတယ် ။ဘယ်သူ ဘာများဖြစ်ပြန်ပြီလဲပေါ့။ ကမန်းကတန်းထ ၊သန့် ရှင်းရေးလုပ် ၊အဝတ်လဲ ပြီး အပြေးအလွှား အရေးပေါ်ခန်းထဲရောက် ၊ အသက် အစိတ်လောက် ရှိတဲ့လူနာအမျိုးသမီး တယောက် ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး ၊မျက်လုံးတွေကလဲ ရီဝေစွာပေါ့ ။ ဒီတော့ ဘာဖြစ်သလဲ ..ဘာညာကွိကွ သူ့ ရဲ့ရာဇဝင် အတိုလေး ကို မှတ်တမ်းရေးရအောင် နဲနဲပါးပါးမေးရတာပေါ့ ။ (suicide case) ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေကြောင်းကြံတာပေါ့လေ ။ ဘရိတ်ဒါး ပါးပါးလေးနဲ့ကိုယ့် လက်ကောက်ဝတ် ကိုယ်ပြန်လှီးတာပေါ့ ။ ဒီတော့ ပြတ်သွားတဲ့အသား၊အရွတ် ၊ အရေပြား တလွှာချင်းပြန်ချုပ်ပေးရင်း လူနာမိန်းကလေး အာရုံပြောင်းအောင် .ကိုယ်လဲ အိပ်ချင်ပြေအောင် စကားစမြည် ပြောဖြစ် မေးဖြစ်သွားတယ် ။ သူကလဲ အရက်ရှိန် မပြေသေးတော့ ပြောတာတွေ အမြီး အမောက် မတဲ့ဟိုရောက် ဒီရောက်ပေါ့။ရည်းစားနဲ့အဆင်မပြေလို့၊သူ့ ရည်းစား က နောက်ထပ်ကောင်မလေး တယောက်နဲ့လှေနံ နှစ်ဖက်နင်း လို့စကားများကြတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။
ဪ ...ဒါနဲ့ များ ကိုယ့် ကိုကိုယ် သေကြောင်းကြံရတယ်လို့ နော် ။ သူက ၂ဖက်နင်းရင် ၊ ကိုယ်က ၃ဖက်လောက်ပြန်နင်းလိုက်ပါလား ၊ အတော်ညံ့ တာဘဲ လို့၊ ကိုယ့် စိတ်ထဲ ဖြစ်မိတဲ့ အတွေး လေးတခုပါ။ ကိုယ့် အသက် ကိုယ်မနှမြောဘဲ အသားအနာခံပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်ရသလားလို့ လဲ သနားစိတ် လား ၊အပြစ်တင်စိတ်လား ကိုယ်မပြောပြတတ်တဲ့စိတ်တခု လဲ ဖြစ်သွားသေးတယ် ။ ဒီတော့ လူနာ မလေးကို စ သလို ၊ နောက်သလို နဲ့စကားတခွန်း လွှတ်ခနဲပြောလိုက်မိတယ် ။ နောက်တခါဆို ဒီလို မမိုက်နဲ့၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မလုပ်နဲ့ .။သူ့ ကိုလုပ် လို့ လေ ။ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ဘေးမှာရှိနေတဲ့ဆရာမလေးက လက်ကုပ်ပြီး သတိပေးမှ ကိုယ့်စကားကိုယ်ပြန်လျှောချရတယ် ။ တော်တော်ကြာ ကိုယ့်စကား အတွက် နှုတ်ကြောင့်သေ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပါ တရားခံ ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ လေ။
လူနာကို လိုအပ်တာတွေ လုပ်ပေးအပြီး အားနေတဲ့အချိန် ၊ကိုယ်လဲအိပ်ချင်စိတ်လုံး ဝပျောက်သွား တော့ ကိုယ့် ရဲ့အကျင့်ဆိုးအတိုင်း အတွေးနယ်ချဲ့ ဖြစ်သွားတယ် ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ မိမိကိုယ် မိမိသတ်သေခြင်း ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါ ။
ဘာဖြစ်လို့ဒီလို သတ် သေကြရတာလဲပေါ့ ။ဒေါသအလျှောက်ဆိုရင် လူတွေဟာ သူများကို အရင်လုပ်ကြတာများပါတယ် ။ သူများကိုလုပ်ဖို့မတတ်သာတော့မှ အားမတန်မာန်လျှော့ ဆိုသလို ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်ဖြစ်ရင် လုပ်ဖြစ်မှာပေါ့ နော်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်သေကြောင်းကြံကြတဲ့အဓိက အကြောင်းရင်း က စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့အချိန် ၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်မသ၊ိ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်မနိုင် ဖြစ်နေတဲ့ အချိန် ၊ အမှားအမှန် ဝေဖန် ပိုင်းခြားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အချိန် အခိုက်အတန့် လေးတခု မှာ ဒီလို လုပ်ဖို့ ကြောက်လန့် ခြင်းတွေ လုံးဝမပေါ်ဘဲ မိမိကိုယ် မိမိ အဆုံး စီရင်တတ်ကြတာပါ ။ (ချွင်းချက်လေးတွေ တော့ ရှိတာပေါ့။ တချို့ က ကိုယ့်က်ို သူများအာရုံစိုက် ဂရုစိုက်လာအောင်ဆိုပြီး ဟန်ပြ သတ်သေပြတာပေါ့ ။တကယ်သေရဲလို့ တော့ မဟုတ်ဘူး ။ အိပ်ဆေးလေး ၄၊၅၊၁၀ လုံးလောက် မသေလောက်တဲ့ပမာဏလောက် သောက်ပြီး ဟန်လုပ်ပြကြတာတွေလဲ ရှိပါတယ်)။ဒါတွေက အကြောင်းရင်းတွေထဲက အနဲငယ်လောက်ပါ
အကျိုးဆက် တွေကရော ။။ ဘယ်လိုရှိ မလဲ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားသဘောနဲ့ ပြောရရင် အဖန် ၅၀၅ ကမ္ဘာတဲ့လေ ။ တကမ္ဘာ ဟာ ဘယ်လောက်ကြာသလဲ ဆိုတာတော့ကိုယ်လဲ သေချာ မသိပါဘူး ။ အကြမ်းဖျင်းကတော့ဘဝပေါင်းမြောက်မြားစွာ ဒီလို သတ်သေခြင်းတွေ ဆက်ခါ ဖြစ်နေအုံးမှာလို့ ပြောကြတာဘဲ ။ ဒီတော့ ကိုယ်လဲ မတွေးကောင်း တွေးကောင်း ပေါက်ကရ တွေးဖြစ်သေးတယ် ၊ ဒီတခေါက်က သူ့ အတွက် ၅၀၄ ကမ္ဘာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာ ပေါ့လို့။ဒါပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရာနှုန်းက အတော်လေး နဲပါတယ် နော် ။ဒါမှမဟုတ် ပထမဦးဆုံး တကမ္ဘာ ဖြစ်နေရင်တော့ မလွယ်ဘူး၊နောက်ထပ် ၅၀၄ ခါ ဆက်သတ်သေ ပေအုံးပေါ့။ သက်သေပြစရာ အထောက်အထားမရှိတော့လဲ အငြင်းပွားမနေချင်တော့ပါဘူး ။ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ လေ ။အဓိက ပြောလို တာ က တော့ကိုယ့်ကို ကိုယ်သတ်သေခြင်း ဟာ မကောင်းဘုး၊ မလုပ်သင့်၊ မလုပ်ထိုက်ဘုး ဆိုတာပါ ။ သေဆုံးခြင်း ၄ မျိုး( သက်တမ်းကုန်ခြင်း ၊ ကံအစွမ်းကုန်ခြင်း၊ သက်တမ်းနှင့် ကံအစွမ်း ၂မျိုးစလုံး ကုန်ခြင်း ၊ ဥပစ္ဆေ ဒက- ကံက သတ်ခြင်း ) ထဲ မှာ မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေခြင်းဟာ ဥပစ္ဆေဒက ကံထဲ ပါဝင်နေပါတယ် ။ အကာလ မရဏ တခုဖြစ်ပါတယ် ။
ကိုယ် တိုင်လဲ မကြာသေးခင် တချိန်က အရာအားလုံး အဆင်မပြေတာတွေ ဆက်တိုက်ကြုံ နေရတော့စိတ်တွေ အတော်လေးညစ်ပြီး သေခြင်စိတ် ပေါက်ခဲ့ ဘူးတယ် ။ စိတ်ကျရောဂါ တမျိုးပေါ့လေ။ လက်ထဲမှာလဲ စိတ် ငြိမ်ဆေး တွေ ၊ အိပ်ဆေးတွေ အလွယ်တကူ အဆင်သင့် ရှိနေတော့တရက်မှာ ဒီလမ်း ပေါ်လျှောက်မိတော့ မလို့နဲနဲဘဲလိုတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တစုံ တယောက်သူ ရဲ့ စကားတခွန်းကြောင့် အချိန်မှီ အသိတခုပေါ်လာလို့ ခုချိန်ထိ အသက်နဲ့ကိုယ်မြဲနေသေးတာပါ ။ ဒါကို ဘယ်သူမှ သိမှာမဟုတ်ပါဘူး ။
အဲ့ဒီ စကားလေးတခွန်းကို ပြောခဲ့ တဲ့သူကိုယ်တိုင်တောင် သိချင်မှ သိမှာပါ ။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ ။သူ့ ကိုကျေးဇူးတင်နေဆဲပါ ။
ကံ ၊ ကံ၏အကျိုး ။ အလုပ်ကောင်းမှ ကံကောင်းမယ် တဲ့ ။ ဒီတော့ ရှေးဘဝတွေက ကံမကောင်း အကြောင်းမလှခဲ့တာတွေ ဒီဘဝမှာ အပြီးသတ်ပေးဆပ်နိုင်အောင် ၊ နောင်ဘဝတွေထိ ကြွေးမကျန်အောင်
ခု အသက်ရှင်နေတုံး လုပ်ကြရမှာ မဟုတ်လား ။ ရခဲလှတဲ့ဒီလူ့ ဘဝကြီး ထဲ က အသေးအဖွဲ ပြသနာတွေ ၊ ဒုက္ခတွေကို ဘာဖြစ်လို့လွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးပေးကြရမှာလဲ ။ လောကကြီးမှာ နေတတ် တွေးတတ်ရင် ပျော်စရာတွေ အများကြီးပါ ။ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင် နဲ့လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
စိတ်မညစ်ပါနဲ့လေ ။ လိပ်ဖြစ်တာ အခွံထူလို့ ပေါ့ ။ ပျော်ပျော်နေ သေခဲ ။ ဒီတော့ ပျော်ပျော်သာနေ ကိုယ့်လူရေ ... Don't Worry , Be Happy !
(ဒါပေမဲ့လေ ၊ ဒါပေမဲ့ပေါ့အပျော်တော့ သိပ်မလွန်စေနဲ့ ပေါ့ ။ ကိုယ့်အပျော်ကြောင့် သူများထိခိုက်တာမျိုးလဲ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ။ ကိုယ်ပျော်ဖို့သူများ မျက်ရည်ကျရတာလဲ မကောင်းဘူးနော် ။)
ပျော်တတ်သူတယောက် အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေနိုင်ပါစေ လို့.......
:kiki : at 11/11/2008 08:25:00 AM
လူငယ် နှင့် ဂီတ အနုပညာ
အပေါ်မှာ တင်ပြထားတဲ့Music Video လေး ဟာ မနှစ်ကနာမယ်ကြီးခဲ့တဲ့
တရုပ် တေးသီချင်းလေးတပုဒ်ပါ။ဒီသီချင်းလေးကို မိတ်ဆွေတို့ကြိုက် ၊ မကြိုက်
တော့ မသိပါဘူး ။ဒါက အဓိက မဟုတ်ပါဘူး ။ အခုပြောပြလိုတာ ဒီသီချင်းလေးရဲ့ 
အဓိပ္ပါယ် ရည်ရွယ်ချက် နဲ့သီချင်းကို ရေးဖွဲ့သီဆို တဲ့နာမယ်ကြီး
လူငယ်အဆိုတော်လေး တယောက်ရဲ့အနုပညာ အကြောင်းပါ။
သီချင်းအမည်က ဗမာလို အဓိပ္ပါယ်ပြန်ရရင် အလုပ်များနေသော နွားကျောင်းသား
( Busy Cowboy) ပေါ့ လေ ။ ဘီယာဆိုင်ရောက်ပေမဲ့နွားနို့ ဘဲ မှာသောက်တတ်တဲ့
နွားကျောင်းသားတယောက် အကြောင်းပေါ့။ အရက်သောက်ရင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်
တတ်တယ် လို့ထဲ့ ဆိုထားပါတယ်။
Jay Chou (Chou Gyae Lun) လို့ အမည်ရတဲ့ ဒီအဆိုတော်လေး ဟာ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ
ကတည်းက မိစုံဖစုံ မနေခဲ့ရပါဘူး ။မိဘနှစ်ပါး ဟာသူလူမှန်းသိတတ်ခါစအချိန်မှာ
ကွာရှင်းပြတ်စဲ ခဲ့ကြပြီး ၊သူဟာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ ရတာပါ ။
သူ့ မိခင်က သူ့ မှာ အနုပညာ ဗီဇရှိမှန်း သတိထားမိခဲ့ လို့စန္ဒရားအတတ်ပညာကို
သူမူလတန်းကျောင်းသားအရွယ်ကတည်းက ဆရာနဲ့စနစ်တကျ သင်ယူစေခဲ့ပါတယ် ။
သူ့ မိခင်က သိပ်ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝ လွန်းလို့ တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
သားဖြစ်သူရဲ့ဝါသနာ နဲ့ဗီဇ ကို ပြုစုပျိုးထောင် ပေးချင်လို့ 
ကြိုးစားပြီး မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့ တာပါ ။ ဒီလိုနဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့
Jay ,ဟာ ဒုက္ခ အမျိုးမျိုး ကြားက ဇွဲ မလျှော့ဘဲ ကိုယ်တိုင် သီချင်းရေး ၊ ဆို နဲ့ 
နောက်ဆုံးတော့ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံလေးထဲတင်မက အာရှတိုက်မှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်
ကျော်ကြားခဲ့ တာ ယနေ့ ထိ ပါဘဲ ။အခုဆို ရုပ်ရှင်လောကထဲ အထိ ဝင်ရောက်ပြီး
သန်းပေါင်းများစွာချမ်းသာနေတဲ့ ဘက်စုံအောင်မြင်နေတဲ့ လူငယ်တဦးပါ ။
သူဘာလို့ဒီလောက်နာမယ်ကြီးနေရတာလဲ ဆိုတာ အဖြေရှာ ကြည့် မိတော့ ၊
သူ့ သီချင်းတွေဟာ ခေတ်လူငယ်တွေ ဘဝနဲ့ ဟပ်စပ်တယ် ။ပေါ်လွင်တယ် ။
ဆန်းသစ်တဲ့အတွေးအခေါ် ၊အသုံးအနှုန်း ၊စကားလုံးတွေ နဲ့လူငယ်တွေကို လမ်းမှားမလျှောက်
မိစေဖို့ သတိပေးထားတာလေးတွေ ၊ ထူးထူးခြားခြားသံစဉ်လေးတွေ ၊ သူ့ ရဲ့ 
တေးသီချင်းစုတိုင်းမှာ တပုဒ်စ၊ နှစ်ပုဒ်စ ထဲ့ သွင်းထားတဲ့အတွက် ၊Series အသစ်ထွက်တိုင်း
Top Ten ထဲမှာ နေရာယူနိုင်ခဲ့ တာပါ။
ယနေ့ ခေတ်လူငယ်တိုင်းလိုလို ဂီတနှင့်မစိမ်းကြပါ ။အရူးအမူး နှစ်ခြိုက်ခြင်း
မျိုးမဟုတ်တာတောင် အနည်းနှင့်အများဟာတေးသီချင်း သီဆိုခြင်း ၊
နားဆင်ခြင်း ၊ ကခုန်ခြင်းများ ရှိတတ်ကြပါတယ်။အခုဆိုရင် MP3 ,MP4 အစရှိတဲ့ 
အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်ပြီး နေရာမရွေး ၊ အချိန်မရွေး နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့
ဖျော်ဖြေရေး ကရိယာများရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂီတနဲ့ ပိုပြီး နီးစပ်စွာ ရှိနေကြပါတယ် ။
ဂီတကို မြတ်နိုးခင်မင်သူများရဲ့အတွင်းစိတ်သန္တာန်ဟာအများအားဖြင့်
သိမ်မွေ့ နူးညံ့ကြပါတယ် ။ငယ်စဉ်ကတည်းက ဂီတကို လေ့လာလိုက်စားခဲ့ ၊
အတူကြီးပြင်းခဲ့ရသူ များမှာ ပိုပြီး သိမ်မွေ့ ကြမှာပါ ။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလျှောက်ပြောင်းလဲနေမြဲဖြစ်တဲ့ဒီ ဂီတသံစဉ်တွေ ၊
စာသား အသုံးအနှုန်းတွေ ကို တချို့ လူကြီးတွေ က နားမလည် လက်မခံ
နိုင်တဲ့အတွက် (အထူးသဖြင့် မြန်မာ ပြည်၌ လက်ရှိ ရေပန်းစားနေသော
ခေတ်ပေါ်တေးသီချင်းများအား နှိမ်ချပြောဆိုခြင်းများအတွက် ) လူကြီး နှင့်လူငယ်
အကြား ကွာဟမှုများ ရှိနေကြရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် လူငယ်တွေ အတွက်
အကျိုးပြုစေနိုင်တဲ့့ ၊ ရည်ရွယ်ချက် အဓိပ္ပါယ်ပြည့် စုံတဲ့မြန်မာ တေးသီချင်းများ ကို
ကြိုဆို အားပေးကြဖို့လိုပါတယ်။
ဒီလို သီချင်းလေးများလဲ များစွာပေါ်ထွက် နေရာရကြစေဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
တရားမဝင် ခိုးကူးခွေများကြောင့်ပင်ကိုယ် အနုပညာရှင်များရဲ့ ဆုံးရှုံးနစ်နာနေမှုများ
အမြန်ဆုံးပပျောက် စေရန်လည်းဂီတ ချစ်သူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ရော
..ယခု ဒီစာဖတ်နေသူ မိတ်ဆွေ လက်ခံနိုင်ပါမည်လား ။။။။
(သီချင်းလေးတွေ ဆိုနေရရင်၊ ကနေရရင၊်တလောကလုံး ကို မေ့ပြီး ပျော်ရွှင် နေတတ်တဲ့ 
ချစ်သော ညီမလေး ငယ် အား သတိတရ )
:kiki : at 11/08/2008 12:09:00 PM
အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ ??
ဟိုးရှေးပဝေသဏီ ကတည်းက ၊ ကမ္ဘာဦး စကတည်းက လူတွေ လူတွေ
တယောက်နဲ့ တယောက် ချစ်လိုက်ကြတာ ... ဘာတဲ့ ... အာဒမ်နဲ့ ဧဝ ၊
ရိုမီယိုနဲ့ ဂျူလီယက် ၊ ရှင်မွေးလွန်းနဲ့ မင်းနန္ဒာ ရာဇဝင်တွင်တဲ့ ဂန္ဓဝင် အချစ်တွေ ။။
ကိုယ်တောင် အဲဒီအချိန်မှာ လူမဖြစ်သေးလို့။
မဟုတ်ရင် ရာဇဝင် စာတင်ခံရတဲ့ အထဲ
ကိုယ့်အမည် ကျန်ရင် ကျန်နေရစ်မှာ ။
ခုခေတ် ၊ နောင်ခေတ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီကမ္ဘာကြီး ရှိနေသ၍
ဒီအချစ်ဆိုတဲ့ ဟာကြီး က ဆက်လက်တည်ရှိနေအုံးမှာ ပေါ့။
ဒီတော့ အားအားယားယား ဟိုတွေး ဒီတွေး အကျင့် က ဖျောက်မရလို
့ပေါက်တတ်ရာရာ လျှောက်တွေးရင်း ကိုယ်တိုင် အဖြူ အမဲ မကွဲသေးတဲ့
ဒီ အချစ်ဆိုတာကြီးကို ဋီကာဖွဲ့ ဖြစ်သွားတာပါ ။။ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ခွဲခြမ်း
၁၅၀၀ အချစ် နဲ့၅၂၈ အချစ် ဟာ ဘာကွာသလဲ ပေါ့
(ဟဲ့ကောင် ငတုံးရဲ့ဒီလောက်လွယ်လွယ်လေးများ
.. မသေမချင်းမှတ်ထား ၉၇၂ ကွာတယ် .. ဒါလေးတောင် မသိဘူး လား ။
ဒါနဲ့ များ စာရင်းစစ်လုပ်နေရသေးတယ် ၊ အံ့ပါရဲ့)
အင်းလေ ။ ဂလို တွက်ကြည့် တော့လဲ ဟုတ်သလို လိုပါဘဲ ။
ဒါဆိုရင် အဲဒီ အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ ။ ပြောစမ်းပါအုံး ။
တချို့ ကပြောတယ် ပေးဆပ်ခြင်းတဲ့၊ခွင့်လွှတ်ခြင်း တဲ့
တချို့ပြောတော့ ရယူ ၊ ပိုင်ဆိုင် လိုခြင်း တဲ့ ။
(အာ ဒီအကောင် အတော်ခက်ပါလား ။ပေးနေတဲ့ သူရှိရင် ယူလိုက်ပေါ့ ကွာ ၊
ဒါမှ အချစ် ဒါနမြောက်သွားမှာပေါ့။ မင်း အချစ် က မင်းကို
နဖါကြိုးထိုးပြီး မဟုတ်တာတွေ လုပ်နေတာ ခွင့်လွှတ်နေချင် သပ ဆိုလဲ
မင်းဟာ လူ့ ငနွားပေါ့ ကွာ)
ပြီးတော့တဖက်သတ်အချစ် တဲ့။ အုံပုန်းချစ် တဲ့ ။
တိတ်တခိုးအချစ် တဲ့ ။
(အင်း ဒါကတော့ နဲနဲ သနားစရာကောင်းတယ် ၊ တဖက်ကချည်းဘဲ သတ်နေတာ
အသတ်ခံရတဲ့ ဖက်က ကြာရင် ဘယ်ခံနိုင်ပါ့မလဲ ။
သေတွင်းဝ မှာနေပြီး ချစ်နေရတာ ကိုး ။သနားပါတယ် ။
အုံပုန်းချစ်လဲ အန္တရာယ် များပါတယ် .. မတော်လို့ 
သူပုန်းနေရတဲ့အနီးနား မှာ ပျားအုံ ရှိနေရင်
အထဲ က ပျားထွက်တုပ်မှ ဒုက္ခ ရောက်မယ် ။
တိတ်တခိုး အချစ်လဲ ပင်ပန်းလွန်းလှ ပါတယ် ။ ချစ်သူ အိပ်ပျော်အောင်
စောင့်ပြီးမှ တိတ်တိတ်ခိုးစားရမှာ ..
ချစ်သူ အိပ်မပျော်တဲ့ညဆို ဘယ်လို လုပ်မလဲ နော်
. ညစာ ငတ်ကိန်းဆိုက်ပြီပေါ့ ။ သူ့ ခမျာ အိပ်ရေးလဲ ပျက်ရသေးတယ် )
ပြီးတော့ ရှိသေးတယ် ... အတ္တ ကြီး တဲ့အချစ် တဲ့ ၊ လောဘ ကြီးတဲ့ 
အချစ် တဲ့ ။
(အမယ်..... ဒါက နာမည် သာ ဆိုးတာ နော် ၊ သူ့ အတွက် တော့ သိပ်ကောင်းတာ ၊
မင်းမသိဘူးလား ကွ ၊)
ဒါဆို ကောက်ရိုးမီး အချစ် ၊ ပွဲပြီးမီးသေ အချစ် တွေ ကျတော့ရော ။။
ကောင်းလား မကောင်းဘူးလား ရှင်းပြပါအုံး ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက်ရှင် ရယ် ။
(အင်း ... ဒါကတော့ ရာသီဥတုပေါ် နဲနဲ အမှီပြု နေတယ်ပေါ့ကွာ ။။
ဂလိုရှိတယ် ငါ့ လူရေ ။ မိုးတွင်းအခါ ဆိုရင်တော့ ရှဲကနဲ အချစ်ဖြစ်မှာပေါ့ 
ကောက်ရိုးမီးလို ဝုန်းကနဲ ထ တောက်ပြီး ၊ အခါမဟုတ်မိုးတို့ ၊
အခါလွန်မိုးတို့ရုတ်တရက် ရွာချလိုက်ရင်တော့ လဲ
မတတ်နိုင်ဘူး လေ .အဲဒါကြောင့် ဘဲ
ပွဲပြီးမီးသေ သွားရတာပေါ့။ နိူ့ မှို့ ရင် ဘယ်ထိ များ မီးခိုးကြွက်လျှောက်
လိုက်ပြီး မိုးမီးလောင်တဲ့အထိ ပြင်းထန်သွားနိုင်တယ်၊ မသိဘူးနော်။
ဒါပေမဲ့ချစ်ရတဲ့သူအတွက် က ကောင်းပါတယ် ။
သူက ရှဲကနဲ ဝုန်းကနဲ ချစ်လိုက်ရတာ ၊
ပွဲပြီးမီးသေ ၊ မီးသတ်ခေါ်ပြီး ငြိမ်းပေးစရာတောင် မလို တော့ဘူး ။
တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် တာပေါ့ ။။ ဟဲ ဟဲ အချစ် ခံရတဲ့သူ အတွက် ကတော့ကွာ
၊ ဆန့်တ ငန့် ငန့်နဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့မှာ မြင်ယောင်နေပါ့င့ါလူရာ ။)
ဒါဆိုလဲ နောက်တခု ပြောပြပါလား။။ Love Is BLIND ဆိုတာလေ ။
( အင်းလေ ငါက မင်းလောက် အင်္ဂလိပ် လို မတတ်ပေမဲ့မေးတဲ့သူရှိတုန်း
တတ် သလို နဲ့ရွှီးရတာပေါ့ .။ မသေမချင်းမှတ်ထား ကွ .
အချစ်က မျက်စိကန်းနေတဲ့အတွက် သူ့ ရှေ့ မှာ မင်း နောက်ထပ်
ရည်းစား အယောက် တရာ ထားထား ၊ တထောင်ထားထား ရ တယ် ။
သူမမြင်ဘူး ။ ဟဲဟဲ တခုတော့ သတိထားပေါ့ ကွာ ၊
သူ့ အနားမှာ အသံဗလန် တွေတော့ မထွက်စေနဲ့ ပေါ့ ။
မျက်စိမကောင်းတဲ့သူတွေ က နားပိုလျှင်တတ်ကြတယ် ။
ဟို လေ ၊ တရုပ်စကားပုံ တခုရှိတယ် ။
ခိုးစားပြီးရင် ပါးစပ်ကို စင်အောင်သုတ်ပါ တဲ့ ၊ ဟားဟား ဟား )
အင်း ။ ဒီနေ့အဖို့ တော့ဒီလောက်ဘဲ ရွှီးတော့ မယ် ။။
အချစ်ဋီကာ အပိုင်း ၁ ပေါ့နော်
ကိုယ့် ရဲ့အချစ်ပေါ် ထင်မြင် သုံးသပ်ချက် လေးတွေပါ
. စိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ရင်တော့လဲ ..
အဲလေ ...ကွာရှင်း ပြတ်စဲ ကြတာပေါ့. ဒီခေတ်ကြီးမှာ
ဒီ အချစ်လောက်နဲ့ဦးဏှောက် အခြောက် ခံ
မနေကြတော့ ပါဘူး။ ဟုတ် တယ် ဟုတ် .
မချစ်ရဆိုရင် ပိုချစ်ချင်တာ လူ့ သဘော ပါ ။
(တစုံ ၂ယောက်သော သူကို ရည်ညွှန်းကြောင်း ဝန်ခံပါသည် )
:kiki : at 11/06/2008 05:55:00 PM
မိမိပြုလုပ်ခဲ့သော ကံများနှင့် ထိုကံများ၏ အကျိုးပေးအလှည့် အစဉ်ပေါ်တွင် တည်ပါသည်။
ကံ( ကမ္မ ) သည် ကိုယ် ၊ နှုတ် ၊စိတ် သုံးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော( ယခုဘဝ နှင့် ရှေးရှေး ဘဝ
အဆက်ဆက်တို့ မှ) ကောင်းမှု မကောင်းမှု များဖြစ်ကြသည်။
ကောင်းသော သုဂတိဘဝ ရောက်နိုင်သည်။
မကောင်းသော ကုသိုလ်ကံများရှိသူသည် မကောင်းသော ဒုဂ္ဂတိဘဝကိုရောက်ရန်ရှိသော်လည်း
(ပါကဒါန ) အကျိုးပေးအလှည့် အစဉ်အားဖြင့် ခွဲခြားရသော ကံ လေးပါးကြောင့်
အချို့့လားရာဂတိများပြောင်းလဲကြရပေသည် ။
(၁) ကြီးလေးသော ဂရုကံ
(၂) သေခါနီးတွင် ပြုသော ၊ အာသန္န ကံ
(၃) အမြဲတစေပြုလုပ်သော အာစိဏ္ဏကံ
(၄) ပြုမိရုံမျှဖြစ်သောကံနှင့်ရှေးဘဝများမှကံ ၊ ကဋတ္တာကံ
ကံ ၄မျိုးအနက် ကြီးလေးသော ဂရုကံ ပြုမိသောသူများသည်
နောင်ဘဝပဋိသန္ဓေ အကျိုးကို မုချပေးသည် ။
ဂရုကံ မရှိလျှင် သေခါနီးတွင်ပြုသော အာသန္နကံ က အကျိုးပေးသည် ။
အာသန္နကံ မရှိလျှင် အမြဲတစေပြုလုပ်သော အာစိဏ္ဏကံ က ပဋိသန္ဓေ အကျိုးကိုပေးသည် ။
ရှေးကံ ၃ ပါး မရှိမှသာ ကဋတ္တာကံက အကျိုးပေးသည် ။
သဘာဝအားဖြင့် အားကောင်းသောကံဖြစ်သည် ။
အာသန္နကံသည် သဘာဝအားဖြင့် အာစိဏ္ဏကံလောက် အားမကောင်းပါ ၊ သို့ သော်
သေပြီးနောက်တဘဝအတွက် ပဋိသန္ဓေ အကျိုးပေးရာတွင် ၊
ပဋိသန္ဓေနှင့် နီးကပ်သောကြောင့် ပဋိသန္ဓေအကျိုးပေးနိုင်ဖို့ ရန် ပို၍ အခွင့်သာသွားပါသည် ။
မျက်မှောက်ကာလတွင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဟောပြောချက်အရ အမရပူရမြို
့(တောင်မြို့ ) မှ ဒါယိကာမကြီးတဦးသည် တောင်သမန်ဘက်တွင် ကျောင်းတိုက်ကြီးဆောက်၍
လှုဒါန်း၏ ။ ထို့ အပြင်
အညာဒေသ ပူပြင်းသောကြောင့် ရေချမ်းစဉ်များစွာကိုလည်း လှုဒါန်းမှုပြု၍ ကျောင်းအမကြီး
ရေချမ်းအမကြီးဟူသော နာမည်နှင့် လူသိများ၏ ။ သူကွယ်လွန်ခါနှီးသောအခါ
သားသမီးများငိုကြလွန်းသောကြောင့် ထိုသူတို့ ကို စွဲလန်း၍(လောဘ ဖြင့်) သေဆုံးသွားသဖြင့်
အဖေါ်တစ္ဆေများနှင့် အပျော်သွားနေကြ၍ သင်္ချိုင်းတွင် လှုဒါန်းမှုများကို မသိလိုက်ပါ
။ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးသည့် အခါတွင်မှ တရားနာရ ၊ အမျှဝေသည်ကိုလည်းရသည် ဟု ၊
တရားဟောပြီးပြန်ကြွသော ဆရာတော်ဘုရားကို လိုက်၍ လျှောက်ထားပြီး
ကွယ်လွန်ခါနီး တွင် ဆွေမျိုး သားသမီးများအနေဖြင့် မငိုမိရန် အထူးသတိထားသင့်သည် ။
သားသမီးကို စွဲလန်းသော လောဘတဏှာ အကုသိုလ် အာသန္နကံက တစ္ဆေ (ပြိတ္တာ)
ဒေါ်အေးမြင့် (မဟာဝိဇ္ဇာ) ၏ သေခြင်းကောင်းသောဘဝ ၊ လားရာကောင်းသော ဂတိ မှ
ူလူတိုင်း အနေကောင်း အသေကောင်း၍ ဘဝကူးကောင်းကြပါစေရန် ။။
:kiki : at 11/04/2008 04:47:00 PM
ယခုထက်တိုင် ဒွိဟ ဖြစ်နေရသော
ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ရှိနေသေးတဲ့ စူးရှရှ ဝေဒနာတခု .ဒီတသက်မှာ ဖြေလို့ရနိူင် ပါ့မလား ?
တနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကို လူတွေရဲ့ပညက်ချက်အရ မကြာသေးဘူးလို့ ပြောလို့ရသလို
ကြာလှပြီဘဲလို့ ဆိုချင်လဲ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။ အမေးရှိရင် အဖြေရှိရတယ်လေ ။
ဟုတ်တယ် ၊ မဟုတ်ဘူး ပေါ့ ။ မှားတယ် ၊ မှန်တယ်ပေါ့ ။။ ဒါပေမဲ့ တချို့ချွင်းချက်ကလေးတွေလဲ တခါတရံမှာတွေ့ ကြုံရတတ်တာ .အဲဒီအခါကျတော့ဘယ်သူ မှန်တယ် ၊ ဘယ်သူမှားတယ်ဆို တာ
ဘာပေတံနဲ့တိုင်းယူရမှာလဲ။
ဒီလိုပါ ၊။ ကိုယ့်အကြောင်းက စပြောမှ ဇာတ်ရည်လည်မှာမို့ ၊ ကိုယ့်ဘဝအကျဉ်းချုပ်လဲ
နဲနဲပါနေရပါတယ်။ ကိုယ်တို့ မွေးချင်း ၆ယောက်မှာ ကိုယ်က နံပတ် ၄ ...
အမ၂ယောက် မှာ အမလတ် နံပတ် ၃ နဲ့အထက်အောက်တွေဆိုတော့ .
ထုံးစံအတိုင်း ကလေးလေးဘဝမှာ အရင်းနှီးဆုံး ကစားဖေါ် ..တခါတရံတော့ 
မတည့် ချိန်မှာ နောင်ဂျိန်ဖက် ပေါ့ ..ဒီလိုနဲ့အသက်တွေဖြေးဖြေးရလာကြတော့
တိုင်ပင်ဖေါ်တိုင်ပင်ဖက်ပေါ့ ၊ နောက်တော့ အချိန် တန်အရွယ်ရောက် ..
သူ့ လမ်းသူလျှောက် ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်လျှောက် .. သူအိမ်ထောင်ကျပြီး နှစ်အနဲငယ်ကြာတော့ 
ကိုယ်လဲ ကိုယ့်ဘဝ အတွက် အဝေးတနေရာ မှာ မပျော်ပေမဲ့ နေ ခဲ့ ရပါတယ် ...
သူက အတော်လေး ပျော်တတ်ရွှင်တတ်တာ .. သင်္ကြန်အချိန်တိုင်း ရေ မကစားရ
ရင် မနေနိုင်တာ သူ့ အကျင့် တခု ပါဘဲ အိမ်မှာရှိတဲ့တူလေး ၊ တူမလေးတွေ ၊
မောင်နှမ တဝမ်းကွဲတွေ နဲ့နှစ်တိုင်းလိုလို ရေ ပက်ခံထွက်ရတာ ထုံးစံတခုလို ပေါ့
. ကိုယ်ကတော့ သင်္ကြန်ရေ မထိရတာ ဆယ်စု နှစ် တခု ကျော်ကြာခဲ့ပါပြီ . .
မနှစ်က သင်္ကြန် အချိန်လဲ သူပျော်နေကြ အတိုင်း သူ့ ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအတာပွဲကို
ဆင်နွှဲ အပြီး ၊ မမျှော်လင့်တဲ့သေမင်းတမန် ကြမ္မာဆိုး ဟာ မိသားစုထံ မဖိတ်ခေါ်ဘဲ
အရောက်လာကာ အမလတ်ကို အပြီးတိုင်ခွဲခွာဖို့ ရက်ချိန်း သတ်မှတ် ပေးလိုက်ပါတယ် ..
အချိန်လွန်နေတဲ့အသည်းကင်ဆာတဲ့ လေ ..
သမားတော်ကြီး ကပြောတာ သူ့ ရဲ့နောက်ဆုံး အချိန် တစ်လ ...အလွန်ဆုံး ၃ လ ပေါ့တဲ့ ။
ဒီလို ခြောက်ခြားစရာ သတင်းဆိုးတခုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်
အဝေးရောက်နေတဲ့ ကိုယ်လဲ ချစ်တဲ့အမလတ်ဆီ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ 
အမြန်ဆုံးရောက်အောင် လာပြီးသေမင်း နဲ့လွန်ဆွဲ ၊ တတ်နိုင်သလောက် စောဒကတက် ဖို့ကြိုးစားကြပါသေးတယ် လေ ၊ ဒါပေမဲ့ အတော်လေးနောက်ကျ သွားခဲ့ရပါပြီ ။ အဲဒီတော့ အမေ ၊
မောင်နှမတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး သူ့ ကို အသိပေးသင့်မပေးသင့် ပေါ့ .. တချို့ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေတွေ က အကြံပေးတယ် ..လူနာကို အသိပေးသင့် တယ်ပေါ့ .. ဒါမှ သူ့ မှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင် စရာတွေ ရှိရင် ပြင်ဆင်နိုင်အောင်လို့တဲ့ ။
တချို့ ပြောတာ ကတော့.. အသိပေးလို့ ရော ဘာထူးမှာမို့ လို့ လဲ..
ပြောလိုက်ရင် စိတ်ဓါတ်ကျပြီး ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ် .ဘာညာပေါ့ လေ ။ အမေကတော့ပြောပါတယ် ..
သမီးဟာ သမီးဘဲ ရောဂါ အခြေအနေ ကို အမှန်အတိုင်း ပြောမယ် ၊မပြောဘူး ဆုံးဖြတ်ပြီး
သမီးနှုတ်ကနေဘဲ အမ ကိုပြောပြပါတဲ့.
ကိုယ်က ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက် တဲ့ ။ ရောဂါ ဝေဒနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့
အလုပ်တခုကို လုပ်နေရတာ ဆို တော့ သူ နေမကောင်းဖြစ်နေတာ
နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ် သူ့ရှေ့ ရောက် ရောက်ချင်း အားကိုးတကြီးနဲ့မေးရှာပါတယ် ..
ငါဘာရောဂါ ဖြစ်နေတာလဲ တဲ့..(သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ က အထက်အောက်တွေဆိုတော့ 
ငယ်ငယ်လေးကတည်းက နင် နဲ့ငါနဲ့ ပြောတာ နှုတ်ကျိုးနေ တာ ပါ ..ကိုယ့်အမတယောက်ကို
နင် နဲ့ငါနဲ့ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတာ ရိုင်းတယ်ထင်ရင်လဲ ထင်ပေါ့လေ ။ ဒီလို ခေါ်တာက ပိုပြီးရင်းနှီးသမို့ကိုယ့်အနေနဲ့ တော့ရိုင်းတယ် လို့မသတ်မှတ်ပါဘူး)
ဒီတော့ ကိုယ် သူ့ ကို ဘယ်လို ပြန် အဖြေပေးရမလဲ လေ ..
.. အမရေ .. နင် အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်နေတာ ..နောက် ထပ် ၁လ ၊အလွန်ဆုံး ၃ လဘဲ
နေရတော့ မှာ လို့ပြောပြရမှာလား .. ..အဲဒီ အချိန် လေးမှာ သူ့ ကိုပြောပြရမဲ့စကားလုံးတွေ
ကိုယ့် ဦးဏှေက်ထဲ ဝေခွဲလို့ မရဘဲ မိနစ်များစွာ မလှုပ်မယှက် ကျောက်ရုပ် တခုလို ငြိမ်သက်သွားခဲ့ရတယ် .. ဒါကို သူလဲ ရိပ်မိသွားတယ် ထင်ပါရဲ့ ။့ဘာဖြစ်လို့ ပြန်မဖြေတာလဲ တဲ့...
ရင်ထဲမှာ တစ်ဆို့ နေတာကြောင့်ကိုယ့်အသံတွေ ဘယ်လိုမှမထွက် နိုင်တာ ။
သူနောက်ထပ် မိနစ်များစွာ ထပ်စောင့်ပြီး နောက်တခါ ထပ်မေးပါတယ် ..
ငါ့ရောဂါက အခြေအနေဆိုးနေလို့ လား ..ဘယ်တော့ပြန်ကောင်းမှာလဲ တဲ့..
. အမရေ .. အဲဒီ အချိန်မှာ ငါအရမ်းငိုချလိုက်ချင်တာ ။ ဒါပေမဲ့နင့် အရှေ့ မှာ ငါငိုလို့ 
ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ ..ဆုံးဖြတ်ချက်တခု ချရတော့ မယ်လေ .. အမှန်အတိုင်းပြောပြရမလား .။ ဒါမှ မဟုတ် ဘုရားမကြိုက်တဲ့မုသာဝါဒါ စကားတွေပြောရမလား ???
မတင်မကျနဲ့၊ ရောချလိုက်ရပါတယ် .. အမ ရောဂါ က ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးဟယ် ။
နင့် အသည်းက နဂို တည်းက သိပ်ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူးလေ ..
ဒီနှစ် သင်္ကြန်မှာ ခုန်တာလွန်သွားလို့ အသည်းပြန်ရောင်နေတာ . အဖုလေးတခုထွက်နေတာပါ ..
သေချာ အနားယူ .ဆေးမှန်မှန်သောက်ရင် ဖြေးဖြေးပြန်ကောင်းလာမှာပေါ့ လေ လို့။
ို့ကိုယ့်အသံမတုန်အောင် မနဲ ကြိုးစား ပြောရပါတယ် ..မုသားတဝက် နဲ့ ငရဲကြီး မယ်ဆိုရင်လဲ မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး ။ အဲဒီတော့ကိုယ့် အမလေ ၊ မယုံတဝက် ယုံ တဝက်နဲ့..
သံသယ မျက်လုံးလေးနဲ့ ဖျော့တော့စွာ ပြုံးပြီးကိုယ့် ကို ဂတိ ပေးရှာပါတယ် ။
အင်းလေ ၊ ဟုတ်မှာပေါ့ ၊ငါက ဒီနှစ် သင်္ကြန် မှာ အတော် သောင်းကျန်းလိုက်တာ ကိုး တဲ့၊
နောင်နှစ်တွေ ဆို မခုန် ၊ မက တော့ပါဘူးတဲ့ ။
့သူ့ မှာ Hepatitis B(ဘီပိုး ပေါ့) ရှိတာ ကြာပါပြီ ..ဖြစ်ခါစတော့ သူ့ ဟာသူ အတော်ဂရုစိုက်
နေခဲ့ပါတယ် ။ဆေးမှန်မှန်သောက်တယ်..Follow up မှန်မှန်လုပ်တယ်ပေါ့၊။
ကိုယ်လဲ အဲဒီ အချိန် တွေတုန်းက တနှစ်တခါ အိမ်ပြန်ရောက်တိုင်း သူ့ ကို အမြဲမေး ..
သတိပေးခဲ့ပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ဒီရောဂါရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြသနာ လေးတွေ သူနားလည်အောင် တခါမှ သေချာ ရှင်းမပြ ခဲ့ မိပါဘူး .။ ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့လျော့ မှုလေး တခုပေါ့ ..။
နောက်တချက်က ကိုယ့်ရဲ့ကြီးမားသော မေ့လျေုာ့ မှု ....
၁၀ နှစ်လောက်ကြာသွားတော့နှစ်တိုင်း အိမ်ပြန်ချိန်တိုင်းမေးနေကျ မေးခွန်းလေးတွေ
ထပ် မ မေးဖြစ်တော့ ပါဘူး ..။ ဒါကြောင့် အတော်ကြီးနောက်ကျမှ အသည်းကင်ဆာ
ဆိုတာသိလိုက်ရတာပါ .. နင်ဒီလို ဖြစ်ရတာ ငါ့ ကြောင့်ပါလို့၊ ခုထိ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အပြစ်တင်
နေမိတုံးပါဘဲ အမရေ ။
နောက်တခု က ။ အမ မေးခဲ့ တုန်းက အမရောဂါ နာမယ် အမှန်တိုင်းမပြောဘဲ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့ ဖြေခဲ့ရတာ ဟာလဲ .အမကို စိတ်မညစ်စေချင်တော့ လို့ ပါ ။ ဒီအတွက်ကြောင့်အမ နောက်ဆုံးလုပ်စရာရှိတာလေးတွေ ၊ ပြင်ဆင်စရာလေးတွေ ၊ အမ ရဲ့အဝေးရောက်နေတဲ့သားအတွက် မှာစရာ ပြောစရာတွေ မပြောဖြစ် ၊မလုပ်ဖြစ် ၊ မမှာဖြစ် ခဲ့ လိုက်ရလို့ နောင်ဘဝထိ မဖြောင့်တန်းနေရရင် တော့ ငါ့ ကို တမလွန်ဘဝ ကနေပြီး နားလည်ပေးပါ အမရယ် ...
အမရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်လေးကို မမှီလိုက်ရတာ လဲစိတ်ထဲ မကောင်းဖြစ်နေရဆဲပါဘဲ အမရေ ။ အလုပ်တဖက်နဲ့ခွင့်ရက်ရှည် တွေ ယူလို့ မရတာနဲ့ရသလောက် အချိန်တို ခွင့်လေးတွေ အခါခါ ယူပြီး အဝေးမှ အခေါက်ခေါက်ပြန်ပြီး အမအနားမှာ အဖေါ်လုပ်ပေးခဲ့ ရတာ ..၂ လ အတွင်း ၃ကြိမ် မြောက့်ငါ့ အပြန်ခရီးကို အမ ဘာလို့မစောင့်ဘဲအလျှင်စလို ထွက်သွားခဲ့ ရတာလဲ အမရယ်။။ အဝေးပြန်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အချိန်တွေ မှာ တနေ့၂ကြိမ် အမဆီ ဖုံးဆက်ပြီး ရယ်စရာတွေ နဲ့အမကို နှစ်သိမ့် နေခဲ့တော့အမကပြောတယ်လေ ..
ဘာလို့ ဖုံးတွေ ခဏခဏဆက်နေရတာလဲ ။နင် ပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာရတဲ့ပိုက်ဆံကို ချွေတာ မှပေါ့ တဲ့. ဖုံးဆက်တိုင်း ကိုယ့်ကို ဆူတယ်လေ ... ငါနေပြန်ကောင်းမှာလို့နင်ဘဲပြောပြီး ဘာလို့စိတ်ပူနေရတာလဲ တဲ့ ။
သူ့ အခြေအနေ သူ အမှန်တကယ် မသိတာလား ။ သိရဲ့သား နဲ့ကိုယ်သူ့ ကို ညာလို့ တမင် ဒီလို ပြောခဲ့ တာလား အမ ရေ ... ဘာလို့ကိုယ့်မှာ ဒီသံသယလေး တခု ခုထိ ရှိနေရသလဲ ဆိုတော့ .. ဒီလိုပါ ....
သူနေမကောင်းဖြစ်လို့ တက်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ တော်ကြီး က S ၂လုံး နဲ့စီ နေတဲ့ဆေးရုံတရုံမှာ အခြေအနေ မဟန်လို့.ရလိုရငြား အိမ်နီးနားချင်း တနိုင်ငံမှာ သွားပြခဲ့တဲ့ ဆေးမှတ်တမ်းတွေ အားလုံး ၊သူမမြင်အောင် ဂျောင် တနေရာမှာ ဖွက်ပြီး ဒုတိယ အကြိမ် ကိုယ်အဝေး ပြန်ခဲ့ တာ ..သူဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း တရက် မှာသူ့ ရဲ့အိပ်ယာလေး သိမ်းပေးရင်းနဲ့ မမျှော်လင့်ဘဲ အဲဒီ ဆေးမှတ်တမ်းတွေ .ဓါတ်မှန်တွေ ကို သူ့ ရဲ့မွေ့ ယာ နဲ့ခေါင်းအုံး အောက်မှာ ရောက်နေတာ တွေ့ လိုက်ရတယ် .သူလဲ ခေတ်ပညာတတ် တယောက်ဘဲလေ ။ဒီ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ လောက်တော့နားလည်မှာပါ ..Medical terms တွေ အကုန်ကိုတော့ ဘယ်နားလည်ပါ့ မလဲ ... HCC လို့ ရေးထားတာ မသိချင် မသိနိုင်ပေမဲ့ cancer ward ဆိုတာလောက်ကိုတော့ သူသိမယ်ထင်ပါတယ် ။
အမရေ . နင့် ကို အမှန် အတိုင်းရောဂါနံမယ် မပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီး ၊ငါ့ကို ရောဂါ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘာတခွန်းမှ ထပ်မမေး ခဲ့ တာ .သေတဲ့ထိပါ ..နင့်ကို ညာလိုက်လို့သေတဲ့ အချိန်ထိ ငါ့ကို မယုံကြည် တော့ဘဲ .ငါ နင့်ဆီရောက်လာမဲ့နာရီပိုင်းအချိန်လေးတောင် မစောင့်တော့ ဘဲ ထွက်သွားခဲ့ ရတာလား အမရယ် ..
ငါ နင့်အပေါ် ဒီတခါဘဲ ညာ မိတာပါ ..ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ .တမလွန်ဘဝကနေပြီး ငါ့ ကိုနားလည်ပေးပါနော် ။။။
ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ့် အဖြစ်အပျက် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယနေ့ ထိ ခံစားနေရတဲ့ 
ဒွိဟ လေးကို ပြောပြနိုင်ရင် ပြောပြပေးပါ လေ
လူတွေ ဟာ ကိုယ်မသေခင် မှာ ၊ ကိုယ်သေရတော့ မဲ့အချိန် နဲ့သေရခြင်း အကြောင်းရင်း ကို မ်ိမိ ကိုယ်တိုင် သိပိုင်ခွင့်ရှိရမှာ ပါသလား ။
သေခါနီးလူတယောက်ကို အမှန်အတိုင်း ပြောပြသင့်ပါသလား ???
( ၂.၈.၂၀၀၇ ) မှာ ဘဝတပါးသို့ထွက်ခွာ သွားခဲ့တဲ့ချစ်အမ မကုကူ သို့သတိရခြင်းများစွာဖြင့်
:kiki : at 11/02/2008 02:01:00 AM
အတောမသတ်နိုင်တဲ့ ဒီလောဘ ရလေ လိုလေ အိုတစ္ဆေ၊ ...
အရူးတယောက်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်း တွေ့ ကြုံဆုံ...
မိမိကိုယ် မိမိ သတ်သေခြင်း(အဆုံးစီရင်ခြင်း) ဒီနေ...
လားရာဂတိ အတွက် ကံများ အကျိုးသက်ရောက်ပုံ လားရာဂတ...
ယခုထက်တိုင် ဒွိဟ ဖြစ်နေရသော ရင်ထဲမှခံစားချက်တခု...